Ukukhuphuka Kokuthengiswa Kwangaphakathi ku-2015 | Martech Zone
Ukukhuphuka Kokuthengiswa Kwangaphakathi ngo-2015
NgoLwesibili, ngoJuni 9, i-2015 NgoLwesibili, ngoJuni 9, i-2015 UJenn Lisak Golding
Ngokuya Ngezinqumo zikaSirius, U-67% wohambo lomthengi manje sekwenziwe ngamadijithi. Lokho kusho ukuthi cishe i-70% yesinqumo sokuthenga yenziwa ngaphambi kokuthi amathemba aqale ingxoxo ezwakalayo ngokuthengisa. Uma unganikeli ngenani ngaphambi kwalokhu kuhlangana kokuqala nommeli, kungenzeka ukuthi ngeke ube ngumlweli wothando lwakho olulindelwe.
Njengoba sonke sazi, ukuthengisa kwangaphakathi bekukhula eminyakeni embalwa edlule, futhi kuyasebenza. Amathemba aphendula kahle kubathengisi bezentengiselwano ngaphakathi kanye nemikhuba yokuthengisa eshintshayo, ngenkathi engazinaki izindlela zendabuko eziphumayo. Kepha lokhu kumane kuyisiqalo, futhi le mboni izoqhubeka nokuvela ngokuhamba kwesikhathi.
"Ukuthengisa ngaphakathi kuguquka ngokushesha ngokuya ngokuziphatha okulindelekile, futhi abamele abathengisayo badinga ukuzivumelanisa nezimo ukuze baphumelele."
I-Salesvue, yethu ezenzakalelayo yokuthengisa umxhasi, ukhiqize i-infographic, Ukukhuphuka Kokuthengiswa Kwangaphakathi ngo-2015, ehlola ukuthengisa okwedlule, kwamanje nekusasa.
Ngaphakathi ukuthengisa kukhula ngama-300% ngokushesha kunokuthengisa kwangaphandle.
Ngokusho kweHarvard Business Review, ukubiza okubandayo AKUSEBENZI isikhathi esingama-90.9%.
Ukuhola okuphumayo kubiza inkampani yakho ngokuya ngokwengeziwe ngenxa yomzamo othatha ukuyivala.
Ukuthengiswa komphakathi kuzoba yindawo evamile.
Buka i-infographic engezansi ukuthola ukuqonda okwengeziwe ekuthengisweni kwangaphakathi. Ngeminye imininingwane ngeSalesvue nangesixazululo sabo se-automation solution, cela i-demo namuhla.
Tags: ukuthengiswa kwe-b2bukuthengisa kwangaphakathiI-Marketing Infographicsukuthengisa okuzenzakalelayoUkunika Amandla Ukuthengisaezenzakalelayo yokuthengisainfographics yokuthengisa
Izincwadi Zokudlala Zedijithali neNkathi Entsha Yokuthengisa